Tag: Akwụkwọ ntuziaka | Martech Zone
Tag: Ngwa ngwa
GoSite: Ihe Ndabere N’iile Na-eme Otu maka Obere Ahia Iji Gaa Dijitalụ
Wednesday, September 16, 2020 Na Tọzdee, Septemba 15, 2020 Douglas Karr
Mmekọrịta adịghị mfe n ’etiti ọrụ ndị obere azụmaahịa gị chọrọ na nyiwe ndị dịnụ. Maka akụrụngwa dị n'ime na ahụmịhe nke ndị ahịa na-enweghị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma nwere ike ịbụ mmefu ego maka ọtụtụ obere azụmaahịa. Obere azụmaahịa chọrọ ọrụ gafere ọtụtụ nyiwe: Weebụsaịtị - weebụsaịtị dị ọcha nke kachasị nke ọma maka ọchụchọ mpaghara. Ozi - ikike iji ụzọ dị mfe na-ekwurịta okwu na ezigbo oge na atụmanya. Ntinye akwụkwọ - usoro ọrụ onwe onye na kansa, ncheta, na
Fraịde, Ọgọstụ 10, 2018 Friday, May 21, 2021 Douglas Karr
Databox bụ azịza dashboarding ebe ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ njikọta emeburu ma ọ bụ jiri API na SDKs ha kpokọta data sitere na isi data gị niile. Ihe Okike Databox ha achọghị ngbanye ọ bụla, yana ịdọrọ na dobe, nhazi, yana njikọ data dị mfe. Njirimara Databox Gụnyere: Mata - Tọọ Njikere maka Ọganihu na metrọ isi site na push, email, ma ọ bụ Slack. Ndebiri - Databox ugbua nwere ọtụtụ narị ndebiri dị njikere
Stitch: Usoro jikọtara ọnụ na njikwa ahịa
Stitch Labs na-enye usoro jikọtara ọnụ na njikwa ngwa ahịa gafee ọwa e-commerce. Zere iji aka gị tinye ọnụọgụ ngwa ahịa na ntanetị, ịchọta akwụkwọ ọnụahịa, ma ọ bụ chọọ ozi ịkpọtụrụ. Stitch na-enye gị ohere ịre n'ọtụtụ ọwa ahịa ahịa na njikwa njikwa site na otu ebe Stitch Atụmatụ ọtụtụ ọwa ahịa - Na-achịkwa ihe niile site na ịtụ ahịa na ịkwụ ụgwọ na mbupu n'otu usoro. Njikwa Akaụntụ - jigide ọnụ ọgụgụ ziri ezi ma hụ na a na-arụ ọrụ iwu n'ụzọ ziri ezi. Tratụ Ndepụta - machiini